Markab ay Iiraan leedahay oo ku qarxay meel u dhow xeebta Sacuudiga - BBC News Somali
Markab ay Iiraan leedahay oo ku qarxay meel u dhow xeebta Sacuudiga
Image caption Sawirro muujinaya markabka lagu magacaabo Sabiti - oo la sheegay in la qaaday maanta oo jimce ah - ayaa laga sii daayay telefishinka Iiraan
Qarax ayaa sababay inuu dab qabsado markab saliid waday oo ay leedahay Iiraan, kaasoo ku sugnaa meel u dhow xeebta dalka Sacuudiga, sida ay ku warrameen warbaahinta Iiraan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in markabka "la weeraray labo jeer" balse wax faahfaahin dheeraad ah ma aysan bixinin.
Subaxnimadii jimcada ee maanta, ilo wareedyo aan la magacaabin ayaa warbaahinta Iiraan u sheegay in markabkaas lagu weeraray gantaallo "laga yaabo" in laga soo tuuray Sacuudiga.
Laakiin shirkadda NIOC waxay goor dambe beenisay sheegashadaas. Waxay sheegeen in qaraxyo ka duwan sidaas ay ka dhaceen markabka, "ayna suurtagal tahay" inay sababeen gantaallo.
Michelle Bockmann, oo ah khabiir ka faallooda arrimaha maraakiibta, ayaa BBC-da u sheegtay in markabkaas - midkuu doonaba ha ahaadee - ay "u badantahay" inuu saliid u waday waddanka Suuriya.
"Arrintaas waa dhab, Iraan iyo Shiinaha oo kaliya ayaa marinkaas isticmaala, waana suuqa kaliya ee lagu gado shidaalka Iiraan, maadaama uu Mareykanka cunaqabateynta ku sii xoojiyay bishii May", ayey tiri Ms Bockmann.
"Waxaan aragnaa siyaasad lagu ciyaarayo hannaanka maraakiibta ee caalamka iyo suuqoodaba, tanina waxay qeyb ka tahay xasilooni darrada aan gobolkaas ku aragno", ayey sii raacisay hadalkeeda.
Image caption Xiisadda u dhaxeysa Sacuudiga iyo Iiraan ayaa sii xoogeysatay
Sidoo kale, mas'uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay mas'uul ka tahay weerarro bishii July lala beegsaday labo markab oo shidaal waday oo ku sugnaa khaliifka, iyo sidoo kale weerar markab kale lagu qaaday bishii May.